Maxaa Ka Jira Wararka Sheegaya In Conte Uu Noqonayo Beddelka Arteta Ee Arsenal? – Garsoore Sports
Maxaa Ka Jira…
Tababarihii hore ee Inter iyo Juventus Antonio Conte ayaa lagu soo waramayaa inuu kamid yahay musharixiinta beddeli doona Mikel Arteta haddii ay Arsenal ceyriso.
Gunners ayaa xilli ciyaareedkan ku bilaabatay si adag iyada oo laba guuldaro la kulantay labadii kulan ee ugu horeeyay ee premier League inkastoo kulankoodii ugu dambeeyay ee Carabao Cup ay guul weyn oo 0:6 ah ka gaareen kooxda West Brom.
Sida laga soo xigtay wargayska, Conte waa mid kamid ah musharraxiinta ay guddiga Arsenal tixgelinayaan haddii Arteta uu wajaho cayrin.
Tababaraha reer Talyaani ayaa ka tagay Inter kaddib laba xilli ciyaareed oo uu kooxda joogay. Wuxuu ku guuleystay Scudetto ololihii 2020-21, laakiin wuxuu buriyay heshiiskii uu Nerazzurri kula jiray si wada jir ah sababo la xiriira aragtiyo kala duwan oo ku saabsan mustaqbalka kooxda iyo xeeladaha suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Achraf Hakimi iyo Romelu Lukaku ayaa ka baxay Stadio Giuseppe Meazza dhowr toddobaad kaddib Conte, iyagoo dhammeystiray u dhaqaaqistooda PSG iyo Chelsea , waa sideey u kala horreeyaan’e.
Conte ayaa sharraxay bixitaankiisa Inter wareysi uu siiyay La Gazzetta dello Sport bishii June.
“Waxa aan dhihi karo waa in mashruuceygu uusan marna is-beddelin, laakiin waxay noqonaysaa wax aan micno lahayn in hadda laga doodo,” ayuu yidhi.
“Ma doonayo inaan abuuro muran ama ka hadlo xil-wareejinta. Waan ixtiraamayaa Zhang waxaanan uga mahadcelinayaa inuu i doortay. Waan jeclahay Inter, kooxda iyo taageerayaashooda. ”
Isla wareysigaas, wuxuu sidoo kale kaga hadlay mustaqbalkiisa: “Guud ahaan, waan jeclahay caqabadaha waana aqbalay qaar badan oo kamid ah intii aan ku jiray xirfadeyda,” ayuu raaciyay tababarihii hore ee Talyaaniga, Inter iyo Juventus.
“Xitaa naadiyadii sarsare ee aan tababaray marnaba ma ahayn kuwa ugu cadcad markii aan imid. Si kastaba ha noqotee, haddii ay jiraan wax aan i qancin, waxaan doorbidayaa inaan aqbalo iyadoon loo eegin lacagta. ”
Arsenal waxaa ku habsaday dhaawacyada xiddigo muhiim ah iyo kuwo kale oo coronavirus uu kaga dhacay, in kasta oo, warbixin dhowaan soo baxday lagu sheegay in guddiga Gunners ay diyaar u yihiin inay aaminaan Arteta laakiin waxaa la sheegayaa in waqti cayiman uu ku badbaadsan karo shaqadiisa.
Sida laga soo xigtay The Telegraph, tababaraha reer Spain wuxuu heystaa shan kulan si uu Gunners u rogo, ama guddiga kooxda ayaa ceyrin doona, Conte ayaana ah musharax u sharaxan inuu beddelo Arteta, sida uu qoray Telegraph.
Conte ayaa badiyay 51 kamid ah 76 kulan oo Premier League ah oo uu leyliyey Chelsea, waxaana uu sababay guushoodii horyaalka sannadkii 2016-17 kahor inta aan laga xayuubin waajibaadkiisa sannadkii 2018.